Faahfaahin socdaalkii xoghayaha arimaha dibada Britian ee Muqdisho(Sawiro) – SBC
Faahfaahin socdaalkii xoghayaha arimaha dibada Britian ee Muqdisho(Sawiro)
Posted by editor on February 2, 2012 Comments
Xoghayaha amuuraha dibada Britain William Hague oo booqasho kadis ah oo uu maanta ku tagey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday in awooda la saaro sidii loola dagaalami lahaa wax uu ku tilmaamay argagixisada saldhiga ka dhigatey Soomaaliya.
Socdaalka William Hague uu ku tagey Muqdisho ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee masuul darajadaasi xambaarsan oo ka socda UK uu ku tago Soomaaliya, iyadoo intii ay socotey booqashadiisa si weyn amaankiisa loo adkeeyey.
Isagoo xiran koofida dagaalka iyo jaakadaha xabada difaaca ee xabadka (bullet-proof vest), laguna wado baabuur qafilan oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ayuu ka dhaqaaqay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho William Hague, isagoo loo galbiyey xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Somalia halkaasi oo uu kulan kula qaatey madaxweynaha DKMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
“Iyadoo la eegayo amaanka UK, xaaladaasi waxay ku lamaansan tahay Soomaaliya oo si buuxda u noqota wadan degan” ayuu yiri Mr Hague oo sidoo kale soo dhaweeyey talaabooyinka 10-ka kun ee ciidamada AMISOM ay qaadeen ee ay Muqdisho kaga saareen xoogaga Shabaabka.
Mr Hague wuxuu xusey in Shabaab oo xiriir la leh Al-qaacida ay wali maamulaan qaybo badan oo ka mid ah Koonfurta dalka, isagoo tibaaxay in loo baahan yahay in la sii ambaqaado hawshaasi oo aan dhamaad aheyn.
Intii uu ku sugnaa xarunta madaxtooyada William Hague wuxuu madaxweyne Shariif Sheekh Axmed baray Matt Baugh oo ah safiirkii ugu horeeyey ee UK ay u magacowdo Soomaaliya, isagoo sheegay in ay Britain safaaradeeda ka furanayso magaalada Muqdisho marka ugu horeysay ee xaaladaha amaanka ay hagaagaan.
Mr Hague oo socdaalkiisa Muqdisho ay ku soo aadayso wax yar uun ka hor shirka arimaha Soomaalida looga hadlayo ee magaalada London ayuu wuxuu ku tilmaamay shirkaasi in arimaha ugu waa weyn ee lagu soo qaadi doono ay ka mid tahay arimaha la dagaalanka argagixisada.
Safiirka cusub ee Britain Mr Baugh ayaa inta safaaradiisa laga furayo waxaa uu ku sii shaqeyn doonaa magaalada Nairobi ee caasimada Kenya.
ma xuma booqashada uu xamar ku tegay wasiirkii hore ee ingiriiska laakiin soomaaliyeey aduun weynaha hada waxaa ka jira in qof walba dan uu u socdo iyo dantiisa. maalin dhoweyd ayuu ahaa markuu yiri reysalwasaaraha ingiriiska David Cameron danta aan ka leenahay soomaaliya ayaa dad hor istaagan, horta anaga dan nooguma jirto shabaab hadana dan nooguma jirto daneysi ma diidanin wax wada qabsi nabad gelyo iyo is ixtiraam